Roobii, Guraandhalaa 10, 2016 Local time: 18:03
WASHINGTON DC— Fiilmiin Afaan Oromoo haaraan kan “Cancala Jaalalaa” jedhu dhiyeenya kana eebbifamee jira. Fiilmiin kun naannolee biyyattii keessatti agrsiisamuuf yeroo ammaa qopheen xumuramaa jira. Qabiyyeen fiilmichaa intalli durbaa tokko gaa’ilaan ala ulfaa’uu ishee fi maatii irraa addaan baatee rakkinaa fi dararaa humnaan gudeeddii irra ga’uu isaa akkasumas aadaa dubartoonni naannoo shawaa jiran yeroo dubartiin deessu sirba sirban of keessaa qaba. Directora fi gulaalaa fiilmii kanaa Mulugeta Haile Gurmu Dandeettii Fiilmii barreessuu attamiin akka horate akkasmas fiilmii cancala jaalalaa jedhu tattamiin qophaa'eef bu'aa ba'ii fiilmii qopheessuu keessa jiru nuuf ibsee jira. Mallattoo Armaan gadii tuquun dhaggeeffadhaa.
Gaaffii fi deebii i